“काण्ड“ | Rastra News
प्रेम सबथोक बनेर आउँछ , अनि त्यही प्रेम सबथोक लिएर जान्छ। बद्लामा तिता यादमा खुर्सानी दलदिन्छ, अनि जिवनभर पोलिरहन्छ त्यस प्रेमले। प्रेम कहाँ को सँग हुन्छ त्यो कसैलाई थाहा नहोला । कोही जवानीको प्यास मेटाउन गर्छन् त कोहि रहरले भने कसैलाई पहिलो नजरमा प्रेम हुन्छ ।
मेरो पनि प्रेम भयो उनीसँग।न त जवानीको प्यास मेटाउन, न त रहरले नै, भयो त बस् पहिलो नजरमै । ऊ आफैँमा राम्री थिई । कसम पहिलो पटक उसलाई देख्दा यसरी मुटु धड्कीयो कि म आफुलाई उसको नजिक लैजान नै सकिन । यति धेरै डर कहिले पनि लागेको थिएन कोहिसँग पनि । प्रश्न मनमा उठ्न थालिसकेका थिए । सँधैजसो बस कुरिरहने उनी आज उनको नजरले अरु कसैले खोजे जस्तो लागिरहेको थियो। हावाहुरी सँगै पानी पर्न थाल्यो। उनी हतारिदै ओत लाग्न खोज्दै थिई। निथ्रुक्क भिजिसकेकी थिई। मनसुनको मौसममा पनि छाता लिएर हिड्न नसक्ने भने मन मनै ।
उसको शरिरका भित्रि भाग देखिँदै थिए, ऊ राम्री देखिदै थिई, कपाल बाट लर्बड निकालेर फिजाउन थाली । कपाल फरफराउदै थियो, र्सलक्क छोडिएका उसका आँखा छोप्न खोज्दै थिए । चोरी औलाले पछाडि कपाल लैजाने उसको यो बानिले म लठ्ठ भएँ । ऊ पराइ थिई, न त मैले चिनेको थिए, न त उसैले नै चिनेकी थिई, तै पनि ऊ मेरा लागी आफ्नो लाग्न थालिसकेकी थिई । मलाई उसलाई आफ्नो बनाउन मन थियो, उनी सँग सात फेरा लिएर जुनि कटाउने सपनामा मग्न हुन थालिसकेको थिएँ ।
कलेजको पहिलो दिन उसलाई देखेको थिएँ ।हरेक दिन बिहान सबेरै बस स्टप देखि उसको पछि लाग्न थाले ।म सोच्थेँ ऊ मेरो नजरबाट कहिले टाढा नहोस्, सँधै भरि कलेज पढिराख्न पाइयोस् ऊ सँग । कलेज प्रोग्राममा जब ऊ मेरो कक्षामा नाम टिपाउन आइ तब म नरवस भएँ । जब म उसको अगाडी पर्थे म भित्रको डर सबै एकै पटक बाहिर आउँथे ।
ऊ आफ्नो अगाडीको कपाल घरिघरि पछाडि लगिराख्थि । प्रोग्रामको दिन ऊ सँग बोल्ने मौका खोज्दै थिएँ ।
‘ओइ साले तेरो मैया त कत्ति केटासँग बोल्दै छे ।’अर्जितले जिस्क्याँउदै भन्यो ।
‘तँलाई कसरी थाहा भो ?’ मैले भनें ।
‘तेरो प्रेम कहानी सबैलाई थाहा छ ’उसले भन्यो ।
मैले डराउँदै सोधें ‘कसले भनेको ?’
‘तेरो मैयाले ।हाहाहहाहा’
म जे नहोस् सोच्थे त्यही भएर छाड्यो । छ महिना पछि लागेपछि किन थाहा नहोस ।अब म उसको अगाडि जानु पो कसरी ? भो अब लाग्दिन पछि मन मनै सोचे ।
प्रोग्राम सकियो, तर घर पुग्न अबेर भैसकेको थियो गाडी चल्न बन्द भएको थियो ।बस स्टप मा उभिरहेकी स्नेहा मेरो छेउमा आएर बसि ।
‘आज पनि फलो गरेको ’ उसले आफ्नो गाला खुम्च्याउँदै भनि ।
आज मैले हैन तिमीले गर्दैछौ भन्न मन थियो तर मन भित्रै दबाएर राखे ।
म उसको कुरा नसुनेको जस्तो गर्दै हिड्न थाले, ऊ मेरो पछि पछि आइरहि।
‘हिँड्दै जाने विचार छ क्याहो मिस्टर ?’उसले भनि ।
‘यो सुनसान रातमा को आउँछ र मलाई लिन ?’ मैले भने ।
‘होला नि कोहि त ह्यान्डसमको ।’ मस्का लगाउँदै उसले भनी ।
‘छ नि यो जुन ,यो तारा ,चिसो हावाको स्पर्श तिमीलाई के थाहा ? यो सबै मेरो साथी हो ।’ मैले भने ।
‘कत्ति जानेको के , तिमीले कसैलाई प्रेम गर्छौ ?’ उसले सोधि
मन त थियो तिमी सँग भन्ने तर म कसरी भनु तिमीलाई । तिमी आफै बुझ्ने प्रयास गर न । कास मनको कुरा नभनि बुझ्ने यन्त्र बने कत्ति को मन पढ्न पाइनथ्यो, कति नकारात्मक र सकारात्मक सोच्छन् सबै थाहा हुन्थ्यो ।
‘गर्छु नि संसार मै सबै भन्दा धेरै आफु सँग ।’ मैले भने ।
‘ आइ मिन केटी ’ उसले भनि ।
‘उम् मेरो आमा ।’
‘उफ् बुद्दु ¤ गर्लफ्रेन्ड क्या।’
साच्चै प्रेम कति निश्चल हुन्छ हगि ।आमा बच्चाको प्रेम ,श्रीमान÷ श्रीमतीको प्रेम , दाजु बहिनि , दाजु भाई , दिदि बहिनि , चरा चुरुङ्गीले गर्ने प्रेम ,जनावरको प्रेम , हर कोहिले गर्ने प्रेम एउटै हो। बस् निभाउनेमा भर पर्छ ।हामी प्रेममा आफ्नो शरिर सुम्पिनुलाई मात्र प्रेम भन्छौं र ? त्यसो भए त धेरै फरक भयो मेरो र उसको प्रेममा । म ऊ बाट शारिरिक भोकको लागि प्रेमको नाटक गरेको होइन । म त ऊ बाट यस्तो प्रेमको अपेक्क्षा गरेको छु जुन मलाई मेरो परिवार बाट उसले आफ्नो आमा बुबा देखोस् ।मेरो सुन्दर भविष्यको गोरेटोमा म ऊ बाट साथ खोजिरहेको छु, जुन पुस्तौँले याद गरोस् हाम्रो प्रेम। जसरी रोमियो र जुलेटलाई गरिन्छ । मलाई यी कुरा उनी सँग गर्न मन छ अनि उसको कपाल पंन्छाउँदै भन्न मन छ स्नेहा मलाई तिम्रो हात समातेर सातफेरा लिन मन छ अनि जीवनको दु ःख र सुख तिमी सँग बाँड्न मन छ, चाहे त्यो मोडमा पहिरो जतिसुकै किन नआउन्, त्यो सबैलाई पंछाउँदै तिम्रो हत्केलामा समाएर सबै मोड तार्नु छ ।
ऊ बाई भनेर आफ्नो कोठा तिर गई, कम्सेकम फोन नम्बर त दिनु त्यो पनि छैन के । म सरासर आफ्नो कोठामा पुगे, कफीको तलतल मेटाउन एक कप बनाए, भोक त्यति लागेको थिएन कलेजको पार्टिले गर्दा । रातो अक्क्षर देखियो नोटिफिकेसनमा ।स्नेहाले छ महिना अघिदेखि पेन्डिङ्गमा रहेको मेरो मित्रता एसेप्ट गर्न भ्याइसकेकी थिई ।मनमा अलग किसिमको तरङ्ग आयो ।मेरो छ महिना देखिको प्रेममा आँपको बोटमा फुल फुँले झैँ एउटा आशाको फुल फुलेको थियो ।करिब आधा घण्टा पछि उसले आफै म्यासेज पठाई । म उसको म्यासेजको प्रतिक्षामा थिए, जसरी एउटा बालक आफ्नो आमाको प्रतिक्षा गर्छ । निकै बेर लाग्यो उसको म्यासेज कुर्दा । एक मिनेट पनि घण्टौँ लाग्यो । एकछिन् पछि उसको म्यासेज आयो मेरो म्यासेन्जरमा ।
‘ओई मिस्टर केहि खायौ कि खाएनौ ? ’उसले सोधि।
‘मैले धेरै खान्छु जस्तो देख्यौं र ?’ मैले भने ।
‘मैले तिमीलाई हेरिन’ उसले भनि – ‘सरि ल मैले अरुले कति खान्छ भनेर हेर्दिन।’
कस्तो केटि के एक बचनमै रिसाउने कम से कम हाँसेर त बोल्नु ।मैले आफु भित्रै गुम्साए यो कुरा ।
‘अनि सुन न’ उसले भनि ।
‘अनि भन न?’ मैले भने ।
‘आइ एम सरि ।’
‘तर किन ।’
‘मैले तिमिलाई अरु जस्तै केटा सोचे ।’
‘म रिसाएर ?’ मैले सोधेँ ।
‘रिसायौं भने नि ।’
‘फकाइन भने ।’
‘ट्राई अन्टिल डाई’
‘म मरे भने नि’
‘मैले मर्न दिइन भने नि’
‘म टाढा गए भने नि ’उसले भनि ।
‘मैले जान दिइन भने नि ’मैले भनेँ ।
‘म जिद्दि छु सक्दैनौ ।’
‘म पनि कम छैन तिमी भन्दा ।’
‘तिमीलाई हिडाइदिए नि त ।’
‘त्यो त म आफै हिँडेकी हुँ ।’
‘यदि मैले फाइदा उठाएको भए ?’
‘तिमीलाई हेर्दै थाहा भो तिमीबाट यो काम हुँदैन ।’
‘किन नहुनु ?’
‘तिमी केटा होइनौ नि त त्यसैले हाहाहाहा ।’ उसले बिल्ला हान्दै भनि ।……
उसले त ठाडै म माथि शंकाको भावानाले हेरी, मेरो मर्दाङ्गी माथि औँला उठाएकी थिई ।म ऊ सँग रिसाए जस्तै गरे, त्यसपछि अफ्लाइन भैदिएँ म पनि के कम ।हिजोको प्रोग्रामको थकाइ मेटाउन छुट्टि दिएको थियो कलेजले ।थकाई पनि किन नलागोस् मृग उफ्रे जसरी नाचेका थिए सबै ।
बिहानै अर्जितको फोन आयो भेट्न आइज भनेर । करिब ९ बजे तिर म कोटेश्वर चोक पुगेँ। त्यहाँ ऊ मात्र थिएन उसले त आफ्नो गर्लफ्रेन्ड नै बोकेर आएछ ।सालेले डल्ले फर्सि पनि बोकेर आएछ भनुँ जस्तो लागेको थियो फेरि इँन्सल्ट गर्यो भनेर छाडेर गै भने , त्यसले मलाई बाँकी पक्कै राख्थेन ।मैले म्यासेज गर्दै भने कतै उसको र्गलफ्रेन्डले सुन्छे कि भनेर ‘साले एक्लै आइजा भनेर उसलाई पनि ल्याएको ?’
‘तँलाई अर्को र्सप्राइज पनि छ न आत्ति ’ उसले भन्यो – ‘ यो त पाँच महिना देखि लुकाएको सरप्राइज ।’
सालेले त मैले भन्दा बढि प्रगति गरेछ, म भने सबै कुरा यसलाई भन्ने उसको भने केहि छैन अत्तो पत्तो ।हामी तिन जना क्याफे भित्र जान मात्र खोज्दै थियौँ स्नेहाको इन्ट्रिले म झसँग भएँ । सालेले यो कुरा पनि लुकाउन भ्याएको रैछ ।
‘यो चाँहि अर्को सरप्राइज बुजिस् नि’ उसले हाँस्दै भन्यो । हिजो रातिको कुरा गरी भने मेरो इज्जतको धज्जी उड्थ्यो पक्कै ।तर स्नेहाले त हामी पहिलो पटक भेटे जसरी पो आफ्नो परिचय दिन थालि ।
‘हाई इट्स मि स्नेहा ’ उसले हात अगाडि बढाउँदै भनि ।
मलाई अझै हिजोको कुराले रिस उठिरहेको थियो ।
‘अनि म चाँहि स्नेहाको बहिनि नेहा ’ अर्जितको गर्लफ्रेन्डले भनि ।सायद नेहालाई पक्कै थाहा थियो हिजो के भयो भनेर ।केटिको जात त हो कुरा घाँटि मुनि राखिराख्न पक्कै सक्दैँनन् । यति भएपछि अर्जितलाई पनि थाहा भैसकेको हुनपर्छ । न भन्दै तिनै जना एक्कासी हाँस्न थाले ।
‘तँ त केटा होइन रैछस् नि स्नेहाले भनेकी ’ अर्जितले आफ्नो पहेँलो परेको दाँत देखाउँदै भन्यो –‘ तँलाई को केटा मन पर्छ हाम्रो कलेजको म मिलाई दिन्छु हाहाहा ।’
तिन जनाको हाँसोले क्याफेमा बसेका सबैले हाम्रो टेबल तिर नजर पल्टाए । एकछिन सबै चुप भए ।मलाई कुनै मौका थिएन बोल्ने, म चुपचाप लागेर बसिँरहे कुनै मौकाको प्रतिक्षामा थिएँ, यसको बद्ला भने म पक्कै लिएर छाड्नेछु । त्यसपछि भने हामी घरतर्फ लाग्यौं।
खाना पकाएर म पस्कँदै, थिएँ कुनै अन्नन् नम्बरबाट फोन आयो ।फोन उठाँए आवाज भने अर्जितको थियो ।
‘ओइ काण्ड हेरिस ?’ उसले आँत्तिदै सोध्यो।
‘के काण्ड ?’ मैले सोधेँ ।
‘स्नेहाको काण्ड ’ – उसले भन्यो ।
म झसंग भए , छाँगाबाट खसे झैं भए ।
मेरो हात खुट्टा लग लग काप्न थाले ।
ऊ मेरो मिल्ने साथी बनि सकेकी थिई ।
काण्ड यसरी फैलियो कि फेसबुक , टुइटर , र्पोन साइट जता सुकै यसको चर्चा भएछ । केटाकेटि सबैले डिमान्ड गरे । ग्रुप देखि लिएर नचिनेकाले समेत मलाई पनि पठाइदे ल भन्न भ्याए धेरैले । यहाँ गलत काम सबै बाट भएको छ भिडियो बनाउने देखि लिएर भिडियो इन्बक्स गर्ने सम्म ।
आत्महत्याको पहिलो कोसिस बेकार बिफल भयो सधैँ घरमा को बसिरहन्छ र दोस्रो पटक ऊ सफल भै ऊ पिँजडा बाट खुल्ला आकाशमा उड्न सफल भै जसरी एउटा चरा पिँजडा बाट उम्किन्छ अनि आफुलाई त्यो आकाशको हावामा मग्न हुन दिन्छ ,केहि सजिलो महसुस गर्छ, हो त्यसरी नै ऊ मुक्त भै त्यो थुना बाट ।
मलाई लाग्यो , उसले यो सब गर्नु अगाडी मलाई भन्न त सक्थी नि ।
तिमी त कायर भएर पा निक्ल्यौं ।
मलाई तिमी आफ्नो लाग्छ स्नेहा, तर तिमिले यस्तो गर्छौ भनेर सोचेको थिईन ।
मेरो आँखा रसाएर आए ।
जब मैले उसको सुसाइड नोट भेटेर डायरी पल्टाएँ । उसले लेखेका पाना पल्टाएँ ।
आँखा बाट आँसु को धारा बग्न थाल्यो ।
‘म आफुले आफुलाई नै यो सबै मोह बाट झिकेर फ्याँक्दैछु । जुन इज्जत मेरो गहना थियोे त्यो खुलम खुल्ला बिकेछ बजारमा । कतिले ………… देखि लिएर मुल्य तोक्न समेत भ्याँए । दुई चार दिन अगाडि बोल्ने साथी बोल्न छाडे ,केटा साथीले ओछ्यानको अफर गर्न थाले। कलेजले बेज्जत भयो भन्दै निकालिदियो । गल्ती के थियो र मेरो जब नुहाउदै थिए कसैले भिडियो बनाइदियो, गल्ति त तब भयो जब म गलत व्यक्तिसँग प्रेममा परेको महसुस गरे । साँचै कति विश्वास थियो म माथि घर परिवारको त्यो त सबै लुटियो ।माया प्रेमको कुरा त सबैले गर्छन तर खोज्छन् माया भित्रको रस अनि जब म भित्रको रस सकिन्छ अनि फ्याकिन्छु जसरी रित्तो डब्बा फ्याकिन्छन् । मेरो रस तब सकियो जब मैले आफुले नुहाउदै गरेको भिडियो जता ततै पाए । दिदि बहिनि भनेर कसले नाता लगाउने यहाँ दाजु भाई पनि माग्न थाल्छन् काण्ड पठाइदे भन्दै अनि भुलिदिन्छन् त्यो पवित्र रिस्ता । हो म लुटिँए जब जताततै भाइरल भयो मेरा नग्न भिडियो। को भन्दा को कम छ र यहाँ, आफन्तले नाता तोडिदिन्छ अनि यो अन्धो समाजले गला घोटिदिन्छ ।लुँटिए आज म , भोलि म जस्तै छोरी फेरि लुटिन्छे अनि भाइरल हुन्छ, फेरि नयाँ नामको काण्ड बनेर जतासुकै । अनि मेटिन्छन् मेरा जस्तै सपना अनि कोरिन्छन् नचाहेको नाम कायर भनेर.